DR Congo: Ku noolaanshaha meel uu dagaal ka socdo
Dagaal culus oo u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka DR Congo ayaa sababay in kumannaan qof ay barakacaan.
Guusha Merkel waa mid aan cago badan ku taagnayn
Angela Merkel waxa ay u muuqatay qof aad u daalan markii ay kasoo muuqatay xarunta dhexe ee xisbigeeda CDU maqribkii markii ay dhamaatay doorashadii.
Caqabado miyaa ka dhalan kara duulimaadyada habeenkii ee garoonka Muqdisho?
Markii ugu horeysay muddo ka badan 25 sano, waxaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ka degtay diyaarad rakaab sidda xili habeen ah.
Haweeneydii "ugu miisaanka cuslayd dunida" oo geeriyootay
Cisbitaal ku yaalla magaalada Abu Dhabi ayaa xaqiijiyay in ay dhimatay haweeney u dhalatay Masar oo lagu sameynayay qalliin lagu caateynayay.
Siyaasi sheegtay in seddaxdii maalinba ay hal mar qubeysato
Siyaasi u dhalatay dalka Koonfur Afrika ayaa sheegtay in saddexdii maalmood ay hal mar qubaysato. Hadaba maxay tahay sababta?
Gudaha Myanmar, ma aha goob laga jecelyahay Dadka qowmiyadda Rohingya, waxaana loo diiday dhalasahada dalkaasi, sidoo kale dibadda inta badan kuma laha saaxib.
Kurdiyiinta Ciraaq oo u codaynaya afti madaxbanaani
Codbixiyayaasha aftida madaxbanaanida ee muranka dhalisay ee gobolka Kurdiyiinta Ciraaq ayaa maanta u dareeraya goobaha codaynta.
Xukuumada Sri Lanka ayaa xirtay nin la sheegay in uu isku dayayay in uu Dahab dhoofiyo isaga oo ku soo qariyay Malawadka .
Maleeshiyda muslimiinta Rohingya oo la eedaynayo
Ciidamada Dalka Burma ayaa muslimiinta Rohigya ku eedeeyey inay dileen labaatan haween ah iyo sided rag ah.
Hoggaamiyaha Jarmalka oo mar afaraad la doortay
Xisbigeeda muxaafidka ayaa natiijadii ugu xumayd ka helay doorashada muddo 70 sano ah, laakiin weli wuxuu haystaa aqlabiyadda baarlamaanka.
Trump oo wadamo cusub ku daray liiska mamnuucida safarada
Madaxwayne Trump ayaa xayiraad cusub ku soo rogay 8 dal oo ay ka mid yihiin Kuuriyada waqooyi, Venezuela iyo Chad.
Madaxwaynaha Kurdiyiinta Ciraaq oo wacad ku maray in aftida ay sii socon doonto
Madaxwaynaha dowladda goboleedka Kurdiyiinta Waqooyiga Ciraaq Masoud Barzani ayaa wacad ku maray in uu sii wadi doono aftida lagu wado in barito ay halkaasi ka dhacdo.
Tirada qaxootiga Rohingya ee soo galaya Bangladesh oo hoos u dhacday
Hay'adaha qaramada midoobey ayaa waxa ay sheegeen in ay hoos u dhacday tirada qaxootiga dadka Rihingya ee ka soo qaxayay dalka Myanmar.
Saraakiisha sarsare ee gudiga doorashada Kenya oo baaritaan lagu samaynayo
Dacwad soo guud ee dalka Kenya ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo suurtagalnimada in xubnaha guddiga doorashada ay galeen danbiyo markii ay qabanayeen doorashadii bishii aanu soo dhaafnay.
Madaxwaynaha Maraykanka ayaa mar kale hanjabaad u jeediyay xukuumada Kuuriyada Waqooyi .
Codbixinta Jarmalka oo bilaabatay iyo Merkel oo markii afraad guul raadinaysa
Goobaha codbixinta ee waddanka Jarmalka ayaa furmay iyadoo dadkuna ay codkooda ka dhiibanayaan doorashada guud ee Federaalka ee dalkaasi, taas oo la saadaaliyay in Hogaamiyaha Jarmalka, Angela Merkel, ay xilkeeda ku soo laaban doonto.
Lix qof ayuu dhaawac ka soo gaaray weerrar ka dhacay bariga London oo looga shakisan yahay in loo adeegsaday walxo sun ah, weerrarkaas ayey rag ka gaysteen dhowr goobood oo u dhaw aagga laga dukaamaysto.